Indlu🏡phantsi kwemithi🌳imbono yaseMont Orford🏔 - I-Airbnb
Indlu🏡phantsi kwemithi🌳imbono yaseMont Orford🏔
UKUFUMANA! Indawo entle kakhulu, enoxolo enombono ophefumlayo weMont Orford. Indlu ibekwe umva endleleni. Ukolula imilenze yakho, ukuhamba ngemizuzu emi-5 kukuthatha ukuya eRuisseau-des-Chênes umzila weMont-Orford, ngaphezu kokuhamba ngemizuzu emi-3 ukusuka eLake Orford. Ilungele umkhweli, i-kayaker, umkhweli webhayisikile okanye ngokulula kubathandi bendalo. Ukongeza, ukuba uziva ngathi, uya kufumana isixeko saseMagogi iikhilomitha ezili-15 kude kunye ne-Eastman iikhilomitha ezisi-7 ukusuka kwindlu.
Indlu ephantsi kwemithi inombono omangalisayo weMont Orford. Ukusuka kwifestile yegumbi lokuhlala kunye nebalcony ungabona abakhweli kwindlela yaseRuisseau-des-Chênes. Indlu ikude nendlela, ngoko ikhuselekile kakhulu kubantwana. Ukufikelela koluntu kwiLake Orford kukuhamba imizuzu emibini. Kufuphi kuyo yonke into kwaye kwangaxeshanye wamkele ubumfihlo. Sihlala kumgangatho wegadi ngasemva kwendlu.
4.95 · Izimvo eziyi-187
Intaba kunye nechibi yindawo esisingqongileyo. Ukuba ufuna ukudlala imidlalo kwaye ufune ukuzola, uyifumene !!! Imizuzu embalwa ukusuka edolophini yaseMagogi apho ulindelwe ziivenkile zokutyela ezininzi kunye neevenkile!
Unokufika ngexesha elifanelekileyo emva ko-3 wasemva kwemini, njengoko umnyango wangaphambili unekhowudi. Izilwanyana zasekhaya zivumelekile ukuba nje zilumkile kwaye indawo yokuhlala icocekile xa ziphuma. Uza kunikwa idiphozithi emva komnikazi
Unokufika ngexesha elifanelekileyo emva ko-3 wasemva kwemini, njengoko umnyango wangaphambili unekhowudi. Izilwanyana zasekhaya zivumelekile ukuba nje zilumkile kwaye indawo yokuhl…
Inombolo yomthetho: 299309